ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ဂွမ်ဂျူးဆု နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဂွမ်ဂျူးဆု နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
အချစ်ထူးလို့လာပြန်ပြီ
မိန့် ခွန်းတွေ ကို သဘာကြ
ပြည်သူ့ အရေးကို ဦးစားပေး
တုနှိုင်းမမှီတဲ့ ဒို့ အမေစု
ဒို့ ခေါင်ဆောင်တဲ့လေး။ ။
Myanmar's opposition leader Aung San Suu Kyi shows the Gwangju Prize for Human Rights during an awarding ceremony in the southwestern city of Gwangju on January 31, 2013. Suu Kyi arrived in South Korea on January 28 forafour-day visit including meetings with politicians andasoap-opera star and the collection ofahuman rights award. Suu Kyi was actually awarded the prize back in 2004 but was unable to receive it as she was under house arrest at the time. AFP PHOTO / JUNG YEON-JE (Photo credit should read JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images) 2013 AFP